Ithegi: cofa | Martech Zone
I-URL entsha: Coca ii-URL zakho zokwabelana
NgoMvulo, Februwari 17, 2014 NgoLwesihlanu, Oktobha 24, 2014 Douglas Karr
Abantu abalungileyo eWistia baphuhlise iscript esinqamlezileyo esibizwa ngokuba yi-URL eNtsha onokuyifaka kwindawo yakho esusa lonke umkhondo wokulandela umkhankaso kunye nenye ikhowudi yokubuza engeyomfuneko kwi-URL yakho. Esi sisixhobo esihle kuba oko kuthetha ukuba iikhowudi zomkhankaso wakho azisayi kuphinda zisetyenziswe njengoko abantu babelana ngekhonkco kwindawo yakho. Njengomzekelo, ukuba unemikhankaso ye-imeyile kunye nephulo lakho lokubuza umbuzo kuyo… kunye ne
I-Optimizer yeWebhusayithi ebonakalayo: Yandisa ukuThengisa kunye nokuGuqula
NgoLwesine, Novemba 14, 2013 NgoMgqibelo, Oktobha 18, 2014 Douglas Karr
I-Optimizer yeWebhusayithi ebonakalayo sisixhobo sokuvavanya i-A / B esivumela iingcali zentengiso ukuba zenze iinguqulelo ezahlukeneyo zewebhusayithi kunye namaphepha okufika kusetyenziswa umhleli wenqaku kunye nokucofa kwaye ubone ukuba loluphi uhlobo oluvelisa inqanaba lokuguqula okanye ukuthengisa. I-Visual Website Optimizer ikwayinkqubo evavanywayo yokuvavanywa kwezinto ezininzi (inkqubo epheleleyo yenyani) kwaye inenani lezixhobo ezongezelelweyo njengokujolisa ekuziphatheni, kwimephu zobushushu, kuvavanyo lokusebenziseka, njl.njl.
Uhlalutyo lwe-Twitter lufikile
NgoLwesihlanu, ngoJuni 12, 2009 NgeCawa, ngo-Novemba 3, 2013 Douglas Karr
Ukuchofoza yiphakheji yokuhlaziya elula elula eqhubeka nokundichukumisa ukuba ndiyisebenzise kuyo nayiphi na iphakheji yokubloga. Inqaku elonwabisayo elisandula ukongezwa kukujonga okumangalisayo kwe-Twitter: Ukudibanisa amanani e-Twitter kwiphakheji yakho ye-Analytics ngumbono omkhulu. Umgaqo endiwumisileyo wokundifumana okanye ibhlog yam yile: douglaskarr OKANYE "douglas KARR" OKANYE "doug KANYE karr" OKANYE martech.zone Undinika iinkcukacha zonxibelelwano zam kuTwitter okanye
NgoMgqibelo, Julayi 7, 2007 NgeCawa, Oktobha 4, 2015 Douglas Karr
UTom ucele ukuba ndicebise ibhlog yakhe, ii-PGA Auctions. Kwaye ndonwabile ukunyanzela! Ibhlog kaTom imalunga neshishini lakhe le-eBay kwaye uhlala ejonge kwifandesi ngoko ke baninzi abantu okhuphisana nabo phaya kwaye kufuneka simfumanele uncedo! Nazi iiNgcebiso zeBlog yakho: Okokuqala, qiniseka ukuba ulungisa ikhonkco kwiPosi kunye nekhonkco ubuyela kwibhlog yam… xa ukopa kwaye uncamathisela